အကွမျးဖကျတိုကျခိုကျမှုတှငျ ပါဝငျခဲ့သူမြားနှငျ့ မိသားစုဝငျမြားသညျ ဘင်ျဂလားဒရှေျ့ နိုငျငံဘကျသို့ ထှကျခှာသှားကွခွငျးဖွဈ » ဗိုလျခြုပျမှူးကွီး မငျးအောငျလှိုငျ
နေပြည်တော်၊ နိုဝင်ဘာ ၁၅
ARSA အစွန်းရောက်ဘင်္ဂါလီ အကြမ်းဖက်သမားများသည် မိမိတို့လုံခြုံရေး တပ်စခန်းများကိုတိုက်ခိုက်ရာတွင် အောင်မြင်မှုမရရှိဘဲ လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်များက ပြန်လည်တိုက်ခိုက်မည်ကို ကြောက်ရွံ့သောကြောင့် ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံဘက်သို့ ထွက်ပြေးခြင်း ဖြစ်ကြောင်း၊ ထိုသို့ထွက်ပြေးစဉ် ၎င်းတို့၏မိသားစုများကိုပါ တစ်ပါတည်းခေါ်၍ ထွက်ခွာသွားခြင်းဖြစ်သဖြင့် ယခုကဲ့သို့ လူဦးရေများပြားသွားခြင်းဖြစ်ကြောင်းဖြင့် တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်က အမေရိကန်နိုင်ငံ၊ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး Hon. Rex Tillerson အား ယနေ့နေ့လယ်ပိုင်းတွင် နေပြည်တော်ရှိ၊ ဇေယျာသီရိဗိမာန်ဧည့်ခန်းမဆောင်၌ လက်ခံတွေ့ဆုံစဉ် ထည့်သွင်းပြောကြားသည်။
တွေ့ဆုံပွဲသို့ တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နှင့်အတူ ဒုတိယတပ်မတော် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်(ကြည်း) ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး စိုးဝင်း၊ ညှိနှိုင်းကွပ်ကဲရေးမှူး (ကြည်း၊ရေ၊လေ) ဗိုလ်ချုပ်ကြီး မြထွန်းဦးနှင့် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရုံး(ကြည်း)မှ တပ်မတော်အရာရှိကြီးများ တက်ရောက်ကြပြီး အမေရိကန်နိုင်ငံ၊ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး Hon. Rex Tillerson နှင့်အတူ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အမေရိကန်နိုင်ငံသံအမတ်ကြီး H.E.Mr.Scot Marciel နှင့်တာဝန်ရှိသူများတက်ရောက်ကြသည်။
ထိုသို့တွေ့ဆုံရာတွင် တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်က မြန်မာ-အမေရိကန် နှစ်နိုင်ငံ သံတမန်ဆက်ဆံမှုမှာ နှစ်ပေါင်း ၇၀ ကျော်ရှိပြီဖြစ်ပြီး ရင်းနှီးသည့် မိတ်ဆွေနိုင်ငံများဖြစ်ကြောင်း၊ ၂၀၁၁ ခုနှစ် ဒီမိုကရေစီအစိုးရသက်တမ်းမှစ၍ နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးသည် ပိုမိုတိုးတက်ကောင်းမွန်လာပြီး အမေရိကန်နိုင်ငံအနေဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံ၏ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများတွင် ထောက်ခံအားပေးမှုများရှိသည့်အတွက် ကျေးဇူးတင်ရှိကြောင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံအနေဖြင့် ဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းပေါ်တွင် ခိုင်ခိုင်မာမာလျှောက်လှမ်းနိုင်ရန်အတွက် ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများ ဆောင်ရွက်နေစဉ်အတွင်း ရခိုင်ဒေသတွင်ပဋိပက္ခများ ဖြစ်ပေါ်လာ ကြောင်း၊ ဖြစ်ပေါ်လာသည့် ကိစ္စရပ်များအားကျော်လွှားနိုင်အောင် ဆောင်ရွက်နေကြောင်း ဦးစွာပြောကြားသည်။
ဧည့်သည်တော်ဝန်ကြီးက ပြန်လည်ပြောကြားရာတွင် နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးသည် အခက်အခဲတချို့ရှိသော်လည်း ရင်းနှီးသည့်ဆက်ဆံမှုများရှိကြောင်း၊ ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း သြဂုတ်လ ၂၅ ရက်နေ့က ဘင်္ဂါလီအကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်သူများက လုံခြုံရေးစခန်းများကို တိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းကြောင့် လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်များ အသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရမှုများအပေါ်များစွာ ၀မ်းနည်းပါကြောင်းနှင့် အကြမ်းဖက်လုပ်ရပ်များကို ရှုတ်ချပါကြောင်း၊ အဆိုပါဖြစ်စဉ် ဖြစ်ပွားပြီးနောက်ပိုင်းတွင် ဘင်္ဂါလီလူမျိုးများ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံဘက်သို့ ထွက်ခွာသွားမှုများကိုသိရှိရပြီး အဆိုပါအကြပ်အတည်းအားနိုင်ငံတကာမှ အာရုံစိုက်ပြောဆိုနေမှုများ ရှိကြောင်း၊ အမေရိကန်ကွန်ဂရက်တွင်လည်း အဆိုပါကိစ္စရပ်အား လူမျိုးတုန်းသန့်စင်မှု သဘောသက်ရောက်သည့် သုံးနှုန်းဆွေးနွေးမှုများရှိကြောင်း၊ ထိုအခြေအနေအား အသုံးချပြီး ကမ္ဘာ့အခြားဒေသမှ အကြမ်းဖက်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့များ ၀င်ရောက်ခြေကုပ် ယူလာနိုင်သည့် အခြေအနေကိုလည်း စိုးရိမ်ရကြောင်း၊ ထို့ကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရအနေဖြင့် နိုင်ငံတကာနှင့်ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ရန်လိုကြောင်း၊ အမေရိကန်နိုင်ငံအနေဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံကို ယခုထက်ပိုမိုအောင်မြင်သည့် နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်စေလိုသည့် ဦးတည်ချက် တစ်ခုသာရှိပြီး လက်ရှိအနေအထားများကိုသိရှိလိုကြောင်း မေးမြန်းဆွေးနွေးသည်။
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်က ပြန်လည်ဆွေးနွေးပြောကြားရာတွင် ရခိုင် ပြည်နယ်အတွင်း ၂၀၁၇ ခုနှစ် သြဂုတ်လ ၂၅ ရက်နေ့ဖြစ်စဉ်သည် ၂၀၁၆ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ ၉ ရက်နေ့ဖြစ်စဉ်နှင့် ၂၀၁၂ ခုနှစ်ဖြစ်စဉ်တို့နှင့် ဆက်စပ်နေကြောင်း၊ ၂၀၁၆ ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ ၉ ရက်နေ့ဖြစ်စဉ်တွင် နယ်ခြားစောင့်ရဲတပ်ဖွဲ့စခန်း ၅ ခုကို အစွန်းရောက်ဘင်္ဂါလီ အကြမ်းဖက်သမားများက တစ်ချိန်တည်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်း၊ အဆိုပါဖြစ်စဉ်ဖြစ်ပွားသည့်အချိန်တွင် တပ်မတော်မှသွားရောက်ရှင်းလင်းစဉ် တပ်မတော်အရာရှိ ၁ ဦး၊ အခြားအဆင့် ၆ ဦးကျဆုံးခဲ့ကာ မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့ဝင် ၁၁ ဦး အသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရပြီး အစွန်းရောက်ဘင်္ဂါလီအကြမ်းဖက်သမားများ လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်များ ထံမှယူဆောင်သွားသည့် လက်နက် ၆၈ လက်အနက် ၃၇ လက်အားပြန်လည် ရရှိခဲ့ကြောင်း၊ ၂၀၁၇ ခုနှစ်အောက်တိုဘာ ၂၅ ရက်နေ့ဖြစ်စဉ်တွင် လုံခြုံရေးစခန်း အခု ၃၀ အားတစ်ချိန်တည်းတိုက်ခိုက်ခဲ့သည့် အစွန်းရောက်ဘင်္ဂါလီ အကြမ်းဖက်သမားများ၏ အင်အားမှာ ယခင်က ၄၀၀၀ ခန့်သာရှိသည်ဟု ခန့်မှန်းခဲ့သော်လည်း ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရုံး(ကြည်း)မှဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးအေးဝင်း ဦးဆောင်သည့် စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့ဖွဲ့စည်းဆောင်ရွက်ခဲ့ချိန်တွင် ၎င်းတို့၏အင်အားမှာ ၆၀၀၀ မှ ၁၀၀၀၀ ခန့်ရှိသည်ကိုသိရှိခဲ့ရကြောင်း၊ ၂၀၁၆ ခုနှစ်ဖြစ်စဉ်အရ လုံခြုံရေး တပ်ဖွဲ့ဝင်များက သတိထားဆောင်ရွက်ခဲ့သဖြင့် ၂၀၁၇ ခုနှစ် သြဂုတ်လ ၂၅ ရက်နေ့တွင် စခန်းတစ်ခုသာမီးရှိုဖျက်ဆီးခံခဲ့ရပြီး နယ်မြေစိုးမိုးရေးဆောင်ရွက်သည့် လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ များနှင့် ARSA အစွန်းရောက်ဘင်္ဂါလီ အကြမ်းဖက်သမားများ ထိတွေ့မှုများရှိခဲ့ကြောင်း၊ သို့သော် စက်တင်ဘာလ ၅ ရက်နေ့ နောက်ပိုင်းတွင်ထိတွေ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားမှုများ မရှိကြောင်း၊ အဆိုပါနယ်မြေအတွင်း တပ်မတော်မှ နယ်မြေလုံခြုံရေးလုပ်ငန်းများအား အချိန်မီဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့သဖြင့် နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းများ၊ ဒေသခံတိုင်းရင်းသားပြည်သူများနှင့် ဘင်္ဂါလီများ၏ အသက်ပေါင်းများစွာကို ကာကွယ်ပေးနိုင်ခဲ့ကြောင်းပြောကြားသည်။
ယင်းနောက် ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံသို့ ထွက်ခွာသွားသည့် ဘင်္ဂါလီလူမျိုးများနှင့် ပတ်သက်၍ မိမိတို့မှအင်အားသုံးတိုက်ခိုက်သဖြင့် ထွက်ခွာသွားသည့်သဘော အဓိပ္ပါယ် သက်ရောက်သည့်စကားလုံးများဖြင့် အမေရိကန်အပါအ၀င်အနောက်နိုင်ငံများက သုံးနှုန်းပြောဆိုမှုများရှိကြောင်း၊ အခြေအနေမှန်ကိုသိရှိရန်လိုကြောင်း၊ သြဂုတ်လ ၂၅ ရက်နေ့မှ စက်တင်ဘာလ ၅ ရက်နေ့အတွင်း ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံဘက်သို့ထွက်ပြေးသူမှာ အင်မတန်နည်းပါးပြီး စက်တင်ဘာလ ၅ ရက်နေ့နောက်ပိုင်းမှသာ ထွက်ခွာသွားကြခြင်း ဖြစ်ကြောင်း၊ အဓိကအကြောင်းအရင်းမှာ ARSA အစွန်းရောက်ဘင်္ဂါလီ အကြမ်းဖက် သမားများသည် မိမိတို့လုံခြုံရေးတပ်စခန်းများကို တိုက်ခိုက်ရာတွင် အောင်မြင်မှုမရရှိခဲ့ဘဲ လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်များက ပြန်လည်တိုက်ခိုက်မည်ကိုကြောက်ရွံ့သောကြောင့် ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံဘက်သို့ ထွက်ပြေးခြင်းဖြစ်ကြောင်း၊ ထိုသို့ထွက်ပြေးစဉ် ၎င်းတို့၏ မိသားစုများကိုပါ တစ်ပါတည်းခေါ်၍ထွက်ပြေးခြင်းဖြစ်သဖြင့် ယခုကဲ့သို့လူဦးရေများပြား သွားခြင်းဖြစ်ကြောင်း၊ ၎င်း ARSA အစွန်းရောက်ဘင်္ဂါလီ အကြမ်းဖက်သမားများသည် အကြောက်တရားဖြင့်ထိန်းချုပ်ရန်အတွက် ကလေးငယ်များ၊ အမျိုးသမီးများနှင့် အစိုးရနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သည့် လူမျိုးတူဘင်္ဂါလီများကိုပါမချန် ရက်ရက်စက်စက် သတ်ဖြတ်ခဲ့ကြကြောင်း၊ အခြားဘင်္ဂါလီလူမျိုးများအားလည်း ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံသို့ထွက်ပြေးရန် ခြိမ်းခြောက်မှုများရှိသကဲ့သို့ တတိယနိုင်ငံတစ်ခုခုတွင် နေထိုင်ခွင့်ရမည်ဟူသော ဆွဲဆောင် မက်လုံးပေးမှုများရှိကြောင်း၊ ၎င်းတို့ထွက်ခွာသွားချိန်တွင် ထွက်ပြေးသည့်ပုံစံမျိုးမဟုတ်ဘဲ အေးအေးဆေးဆေး ထွက်ခွာသွားကြခြင်းဖြစ်ကြောင်း၊ အဆိုပါကိစ္စရပ်များအား နိုင်ငံတကာမှ အမှန်အတိုင်းမသိရှိဘဲ မိမိတို့မှနှိပ်စက်မှုကြောင့်ထွက်ပြေးသွားသည်ဟု ယူဆပြောဆိုမှုများရှိသည့်အတွက် အခြေအနေမှန်များအား သိရှိရန်လိုအပ်ကြောင်း၊ ထွက်ခွာသွားသည့် ဘင်္ဂါလီလူမျိုးများအား ဥပဒေနှင့်အညီ ပြန်လည်လက်ခံရန်အတွက်လည်း ဆောင်ရွက်နေကြောင်း၊ ဒေသခံတိုင်းရင်းသားရခိုင်များနှင့် ဘင်္ဂါလီလူမျိုးများ နှစ်ဖက်စလုံးက လက်ခံနိုင်သည့်အခြေအနေရှိရန်လိုအပ်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံသားစစ်စစ်များ ဖြစ်သည့် ဒေသခံရခိုင်တိုင်းရင်းသားများ၏ဆန္ဒကို အလေးထားရမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ဒေသခံရခိုင်တိုင်းရင်းသားများကလက်ခံမှသာ ပြည်သူလူထုအားလုံးက ကျေနပ်လက်ခံမှာ ဖြစ်ကြောင်း၊ ၎င်းတို့လက်ခံနိုင်မည့် အခြေအနေမရှိလျင် တစ်ဖက်တွင်နိုင်ငံရေး မတည်ငြိမ်မှုများဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သဖြင့် မျှတသည့်ဆောင်ရွက်မှုများ လုပ်ဆောင်ပေးရန် အကြိမ်ကြိမ်အခါခါ ပြောကြားခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း၊ ဒေသခံတိုင်းရင်းသားရခိုင်လူမျိုးများက ရခိုင်ဒေသသို့ ရောက်ရှိလာသည့် လူသားချင်းဆိုင်ရာ နိုင်ငံတကာမှ အကူအညီပေးမှုများသည် ဘင်္ဂါလီများအတွက်သာဖြစ်ပြီး မိမိတို့ရခိုင်လူမျိုးများအား ပေးအပ်ခြင်းမရှိသည်ကို သိရှိကြကြောင်း၊ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံသို့ ထွက်ခွာသွားသည့် ဘင်္ဂါလီလူမျိုးများအားပြန်လည် လက်ခံရာတွင်လည်း ၁၉၈၂ ခုနှစ်နိုင်ငံသားဥပဒေ၊ ၁၉၉၂ ခုနှစ် မြန်မာ-ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နှစ်နိုင်ငံသဘောတူညီချက်များနှင့် အညီစိစစ်လက်ခံမည်ဖြစ်ပြီး မိမိတို့အနေဖြင့် ငြင်းပယ်ရန်မရှိကြောင်း၊ ၁၉၇၈ ခုနှစ်ကလည်း ယခုကဲ့သို့အလားတူ ဖြစ်စဉ်တစ်ခုဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း၊ ယင်းအချိန်က မြန်မာနိုင်ငံဘက်မှ ကောက်ယူထားသည့်စာရင်းအရ လူဦးရေ ၁၅၆၆၃၀ ဦးဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နိုင်ငံဘက်သို့ ထွက်ပြေးခဲ့သော်လည်း နှစ်နိုင်ငံသဘောတူညီချက်အရ ပြန်လည်စိစစ် လက်ခံသည့်အချိန်တွင် ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံဘက်မှ အဆိုပြုချက်အရလူဦးရေ ၁၈၆၉၀၀ ကျော်အားလက်ခံခဲ့ရသဖြင့် လူဦးရေ ၃၀၀၀၀ ကျော် ပိုမိုလက်ခံခဲ့ရကြောင်း၊ ယခုအချိန်တွင်လည်း ၎င်းတို့ဘက်မှပြောသည့်လူအရေအတွက်အတိုင်း လက်ခံ၍မရကြောင်း၊ အဆိုပါကိစ္စများအား အစိုးရကဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ပြီး တပ်မတော်မှ ကူညီဆောင်ရွက်ပေးမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာ အကူအညီ ပေးမှုများအနေဖြင့်လည်း နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဦးဆောင်သည့် ရခိုင်ပြည်နယ်တည်ငြိမ်အေးချမ်းမှုနှင့် ဖွံ့ဖြိုးမှုတိုးတက်မှုအကောင်အထည် ဖော်ရေး ဗဟိုကော်မတီနှင့် ပြည်နယ်အစိုးရမှသက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများက ဆောင်ရွက်ပေးနေပြီး တပ်မတော်မှ ပူးပေါင်းပါဝင်ကူညီဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိကြောင်း ရှင်းလင်း ပြောကြားသည်။
ထို့နောက် ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း တပ်မတော်မှ စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့ ဖွဲ့စည်း၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့မှုအခြေအနေများ၊ ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း ဖြစ်ပွားလျက်ရှိသည့် ဖြစ်စဉ်မှန်များအား နိုင်ငံတကာမှ သိရှိစေရန်အတွက် ဆောင်ရွက်သင့်သည့်ကိစ္စရပ်များ၊ မြန်မာနိုင်ငံသို့ ပြန်လည်ဝင်ရောက်လာသည့် ဘင်္ဂါလီလူမျိုးများအတွက် အစိုးရမှ ပြန်လည်နေရာချထားနိုင်ရေး ဆောင်ရွက်နေမှုအခြေအနေများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဧည့်သည်တော်ဝန်ကြီး၏ အကြံပြုချက်များကိုအမြင်ချင်းဖလှယ်ပြီး အကြမ်းဖက်မှု နှိမ်နင်းရေးနှင့် မူးယစ်ဆေးဝါးတိုက်ဖျက်ရေးအတွက်နှစ်နိုင်ငံ တပ်မတော်နှစ်ရပ်လက်တွဲ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်ရန် နည်းလမ်းရှာဖွေရေးကိစ္စရပ်များအား ရင်းနှီးပွင့်လင်းစွာ အပြန်အလှန်ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။
အကွမျးဖကျတိုကျခိုကျမှုတှငျ ပါဝငျခဲ့သူမြားနှငျ့ မိသားစုဝငျမြားသညျ ဘင်ျဂလားဒရှေျ့ နိုငျငံဘကျသို့ ထှကျခှာသှားကွခွငျးဖွဈ
နပွေညျတျော၊ နိုဝငျဘာ ၁၅
ARSA အစှနျးရောကျဘင်ျဂါလီ အကွမျးဖကျသမားမြားသညျ မိမိတို့လုံခွုံရေး တပျစခနျးမြားကိုတိုကျခိုကျရာတှငျ အောငျမွငျမှုမရရှိဘဲ လုံခွုံရေးတပျဖှဲ့ဝငျမြားက ပွနျလညျတိုကျခိုကျမညျကို ကွောကျရှံ့သောကွောငျ့ ဘင်ျဂလားဒရှေျ့နိုငျငံဘကျသို့ ထှကျပွေးခွငျး ဖွဈကွောငျး၊ ထိုသို့ထှကျပွေးစဉျ ၎င်းငျးတို့၏မိသားစုမြားကိုပါ တဈပါတညျးချေါ၍ ထှကျခှာသှားခွငျးဖွဈသဖွငျ့ ယခုကဲ့သို့ လူဦးရမြေားပွားသှားခွငျးဖွဈကွောငျးဖွငျ့ တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျ ဗိုလျခြုပျမှူးကွီး မငျးအောငျလှိုငျက အမရေိကနျနိုငျငံ၊ နိုငျငံခွားရေးဝနျကွီး Hon. Rex Tillerson အား ယနနေ့လေ့ယျပိုငျးတှငျ နပွေညျတျောရှိ၊ ဇယြောသီရိဗိမာနျဧညျ့ခနျးမဆောငျ၌ လကျခံတှဆေုံ့စဉျ ထညျ့သှငျးပွောကွားသညျ။
တှဆေုံ့ပှဲသို့ တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျနှငျ့အတူ ဒုတိယတပျမတျော ကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျ ကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျ(ကွညျး) ဒုတိယဗိုလျခြုပျမှူးကွီး စိုးဝငျး၊ ညှိနှိုငျးကှပျကဲရေးမှူး (ကွညျး၊ရေ၊လေ) ဗိုလျခြုပျကွီး မွထှနျးဦးနှငျ့ ကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျရုံး(ကွညျး)မှ တပျမတျောအရာရှိကွီးမြား တကျရောကျကွပွီး အမရေိကနျနိုငျငံ၊ နိုငျငံခွားရေးဝနျကွီး Hon. Rex Tillerson နှငျ့အတူ မွနျမာနိုငျငံဆိုငျရာ အမရေိကနျနိုငျငံသံအမတျကွီး H.E.Mr.Scot Marciel နှငျ့တာဝနျရှိသူမြားတကျရောကျကွသညျ။
ထိုသို့တှဆေုံ့ရာတှငျ တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျက မွနျမာ-အမရေိကနျ နှဈနိုငျငံ သံတမနျဆကျဆံမှုမှာ နှဈပေါငျး ရ၀ ကြျောရှိပွီဖွဈပွီး ရငျးနှီးသညျ့ မိတျဆှနေိုငျငံမြားဖွဈကွောငျး၊ ၂၀၁၁ ခုနှဈ ဒီမိုကရစေီအစိုးရသကျတမျးမှစ၍ နှဈနိုငျငံဆကျဆံရေးသညျ ပိုမိုတိုးတကျကောငျးမှနျလာပွီး အမရေိကနျနိုငျငံအနဖွေငျ့ မွနျမာနိုငျငံ၏ပွုပွငျပွောငျးလဲမှုမြားတှငျ ထောကျခံအားပေးမှုမြားရှိသညျ့အတှကျ ကြေးဇူးတငျရှိကွောငျး၊ မွနျမာနိုငျငံအနဖွေငျ့ ဒီမိုကရစေီလမျးကွောငျးပျေါတှငျ ခိုငျခိုငျမာမာလြှောကျလှမျးနိုငျရနျအတှကျ ပွုပွငျပွောငျးလဲမှုမြား ဆောငျရှကျနစေဉျအတှငျး ရခိုငျဒသေတှငျပဋိပက်ခမြား ဖွဈပျေါလာ ကွောငျး၊ ဖွဈပျေါလာသညျ့ ကိစ်စရပျမြားအားကြျောလှားနိုငျအောငျ ဆောငျရှကျနကွေောငျး ဦးစှာပွောကွားသညျ။
ဧညျ့သညျတျောဝနျကွီးက ပွနျလညျပွောကွားရာတှငျ နှဈနိုငျငံဆကျဆံရေးသညျ အခကျအခဲတခြို့ရှိသျောလညျး ရငျးနှီးသညျ့ဆကျဆံမှုမြားရှိကွောငျး၊ ရခိုငျပွညျနယျအတှငျး သွဂုတျလ ၂၅ ရကျနကေ့ ဘင်ျဂါလီအကွမျးဖကျတိုကျခိုကျသူမြားက လုံခွုံရေးစခနျးမြားကို တိုကျခိုကျခဲ့ခွငျးကွောငျ့ လုံခွုံရေးတပျဖှဲ့ဝငျမြား အသကျဆုံးရှုံးခဲ့ရမှုမြားအပျေါမြားစှာ ၀မျးနညျးပါကွောငျးနှငျ့ အကွမျးဖကျလုပျရပျမြားကို ရှုတျခပြါကွောငျး၊ အဆိုပါဖွဈစဉျ ဖွဈပှားပွီးနောကျပိုငျးတှငျ ဘင်ျဂါလီလူမြိုးမြား ဘင်ျဂလားဒရှေျ့နိုငျငံဘကျသို့ ထှကျခှာသှားမှုမြားကိုသိရှိရပွီး အဆိုပါအကွပျအတညျးအားနိုငျငံတကာမှ အာရုံစိုကျပွောဆိုနမှေုမြား ရှိကွောငျး၊ အမရေိကနျကှနျဂရကျတှငျလညျး အဆိုပါကိစ်စရပျအား လူမြိုးတုနျးသနျ့စငျမှု သဘောသကျရောကျသညျ့ သုံးနှုနျးဆှေးနှေးမှုမြားရှိကွောငျး၊ ထိုအခွအေနအေား အသုံးခပြွီး ကမ်ဘာ့အခွားဒသေမှ အကွမျးဖကျလကျနကျကိုငျအဖှဲ့မြား ၀ငျရောကျခွကေုပျ ယူလာနိုငျသညျ့ အခွအေနကေိုလညျး စိုးရိမျရကွောငျး၊ ထို့ကွောငျ့ မွနျမာနိုငျငံအစိုးရအနဖွေငျ့ နိုငျငံတကာနှငျ့ပူးပေါငျး ဆောငျရှကျရနျလိုကွောငျး၊ အမရေိကနျနိုငျငံအနဖွေငျ့ မွနျမာနိုငျငံကို ယခုထကျပိုမိုအောငျမွငျသညျ့ နိုငျငံတဈနိုငျငံဖွဈစလေိုသညျ့ ဦးတညျခကျြ တဈခုသာရှိပွီး လကျရှိအနအေထားမြားကိုသိရှိလိုကွောငျး မေးမွနျးဆှေးနှေးသညျ။
တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျက ပွနျလညျဆှေးနှေးပွောကွားရာတှငျ ရခိုငျ ပွညျနယျအတှငျး ၂၀၁၇ ခုနှဈ သွဂုတျလ ၂၅ ရကျနဖွေ့ဈစဉျသညျ ၂၀၁၆ ခုနှဈ အောကျတိုဘာလ ၉ ရကျနဖွေ့ဈစဉျနှငျ့ ၂၀၁၂ ခုနှဈဖွဈစဉျတို့နှငျ့ ဆကျစပျနကွေောငျး၊ ၂၀၁၆ ခုနှဈအောကျတိုဘာလ ၉ ရကျနဖွေ့ဈစဉျတှငျ နယျခွားစောငျ့ရဲတပျဖှဲ့စခနျး ၅ ခုကို အစှနျးရောကျဘင်ျဂါလီ အကွမျးဖကျသမားမြားက တဈခြိနျတညျးတိုကျခိုကျခဲ့ကွောငျး၊ အဆိုပါဖွဈစဉျဖွဈပှားသညျ့အခြိနျတှငျ တပျမတျောမှသှားရောကျရှငျးလငျးစဉျ တပျမတျောအရာရှိ ၁ ဦး၊ အခွားအဆငျ့ ၆ ဦးကဆြုံးခဲ့ကာ မွနျမာနိုငျငံရဲတပျဖှဲ့ဝငျ ၁၁ ဦး အသကျဆုံးရှုံးခဲ့ရပွီး အစှနျးရောကျဘင်ျဂါလီအကွမျးဖကျသမားမြား လုံခွုံရေးတပျဖှဲ့ဝငျမြား ထံမှယူဆောငျသှားသညျ့ လကျနကျ ၆၈ လကျအနကျ ၃၇ လကျအားပွနျလညျ ရရှိခဲ့ကွောငျး၊ ၂၀၁၇ ခုနှဈအောကျတိုဘာ ၂၅ ရကျနဖွေ့ဈစဉျတှငျ လုံခွုံရေးစခနျး အခု ၃၀ အားတဈခြိနျတညျးတိုကျခိုကျခဲ့သညျ့ အစှနျးရောကျဘင်ျဂါလီ အကွမျးဖကျသမားမြား၏ အငျအားမှာ ယခငျက ၄၀၀၀ ခနျ့သာရှိသညျဟု ခနျ့မှနျးခဲ့သျောလညျး ကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျရုံး(ကွညျး)မှဒုတိယဗိုလျခြုပျကွီးအေးဝငျး ဦးဆောငျသညျ့ စုံစမျးစဈဆေးရေးအဖှဲ့ဖှဲ့စညျးဆောငျရှကျခဲ့ခြိနျတှငျ ၎င်းငျးတို့၏အငျအားမှာ ၆၀၀၀ မှ ၁၀၀၀၀ ခနျ့ရှိသညျကိုသိရှိခဲ့ရကွောငျး၊ ၂၀၁၆ ခုနှဈဖွဈစဉျအရ လုံခွုံရေး တပျဖှဲ့ဝငျမြားက သတိထားဆောငျရှကျခဲ့သဖွငျ့ ၂၀၁၇ ခုနှဈ သွဂုတျလ ၂၅ ရကျနတှေ့ငျ စခနျးတဈခုသာမီးရှိုဖကျြဆီးခံခဲ့ရပွီး နယျမွစေိုးမိုးရေးဆောငျရှကျသညျ့ လုံခွုံရေးတပျဖှဲ့ မြားနှငျ့ ARSA အစှနျးရောကျဘင်ျဂါလီ အကွမျးဖကျသမားမြား ထိတှမှေု့မြားရှိခဲ့ကွောငျး၊ သို့သျော စကျတငျဘာလ ၅ ရကျနေ့ နောကျပိုငျးတှငျထိတှတေို့ကျပှဲဖွဈပှားမှုမြား မရှိကွောငျး၊ အဆိုပါနယျမွအေတှငျး တပျမတျောမှ နယျမွလေုံခွုံရေးလုပျငနျးမြားအား အခြိနျမီဆောငျရှကျနိုငျခဲ့သဖွငျ့ နိုငျငံ့ဝနျထမျးမြား၊ ဒသေခံတိုငျးရငျးသားပွညျသူမြားနှငျ့ ဘင်ျဂါလီမြား၏ အသကျပေါငျးမြားစှာကို ကာကှယျပေးနိုငျခဲ့ကွောငျးပွောကွားသညျ။
ယငျးနောကျ ဘင်ျဂလားဒရှေျ့နိုငျငံသို့ ထှကျခှာသှားသညျ့ ဘင်ျဂါလီလူမြိုးမြားနှငျ့ ပတျသကျ၍ မိမိတို့မှအငျအားသုံးတိုကျခိုကျသဖွငျ့ ထှကျခှာသှားသညျ့သဘော အဓိပ်ပါယျ သကျရောကျသညျ့စကားလုံးမြားဖွငျ့ အမရေိကနျအပါအဝငျအနောကျနိုငျငံမြားက သုံးနှုနျးပွောဆိုမှုမြားရှိကွောငျး၊ အခွအေနမှေနျကိုသိရှိရနျလိုကွောငျး၊ သွဂုတျလ ၂၅ ရကျနမှေ့ စကျတငျဘာလ ၅ ရကျနအေ့တှငျး ဘင်ျဂလားဒရှေျ့နိုငျငံဘကျသို့ထှကျပွေးသူမှာ အငျမတနျနညျးပါးပွီး စကျတငျဘာလ ၅ ရကျနနေ့ောကျပိုငျးမှသာ ထှကျခှာသှားကွခွငျး ဖွဈကွောငျး၊ အဓိကအကွောငျးအရငျးမှာ ARSA အစှနျးရောကျဘင်ျဂါလီ အကွမျးဖကျ သမားမြားသညျ မိမိတို့လုံခွုံရေးတပျစခနျးမြားကို တိုကျခိုကျရာတှငျ အောငျမွငျမှုမရရှိခဲ့ဘဲ လုံခွုံရေးတပျဖှဲ့ဝငျမြားက ပွနျလညျတိုကျခိုကျမညျကိုကွောကျရှံ့သောကွောငျ့ ဘင်ျဂလားဒရှေျ့နိုငျငံဘကျသို့ ထှကျပွေးခွငျးဖွဈကွောငျး၊ ထိုသို့ထှကျပွေးစဉျ ၎င်းငျးတို့၏ မိသားစုမြားကိုပါ တဈပါတညျးချေါ၍ထှကျပွေးခွငျးဖွဈသဖွငျ့ ယခုကဲ့သို့လူဦးရမြေားပွား သှားခွငျးဖွဈကွောငျး၊ ၎င်းငျး ARSA အစှနျးရောကျဘင်ျဂါလီ အကွမျးဖကျသမားမြားသညျ အကွောကျတရားဖွငျ့ထိနျးခြုပျရနျအတှကျ ကလေးငယျမြား၊ အမြိုးသမီးမြားနှငျ့ အစိုးရနှငျ့ ပူးပေါငျးဆောငျရှကျသညျ့ လူမြိုးတူဘင်ျဂါလီမြားကိုပါမခနျြ ရကျရကျစကျစကျ သတျဖွတျခဲ့ကွကွောငျး၊ အခွားဘင်ျဂါလီလူမြိုးမြားအားလညျး ဘင်ျဂလားဒရှေျ့နိုငျငံသို့ထှကျပွေးရနျ ခွိမျးခွောကျမှုမြားရှိသကဲ့သို့ တတိယနိုငျငံတဈခုခုတှငျ နထေိုငျခှငျ့ရမညျဟူသော ဆှဲဆောငျ မကျလုံးပေးမှုမြားရှိကွောငျး၊ ၎င်းငျးတို့ထှကျခှာသှားခြိနျတှငျ ထှကျပွေးသညျ့ပုံစံမြိုးမဟုတျဘဲ အေးအေးဆေးဆေး ထှကျခှာသှားကွခွငျးဖွဈကွောငျး၊ အဆိုပါကိစ်စရပျမြားအား နိုငျငံတကာမှ အမှနျအတိုငျးမသိရှိဘဲ မိမိတို့မှနှိပျစကျမှုကွောငျ့ထှကျပွေးသှားသညျဟု ယူဆပွောဆိုမှုမြားရှိသညျ့အတှကျ အခွအေနမှေနျမြားအား သိရှိရနျလိုအပျကွောငျး၊ ထှကျခှာသှားသညျ့ ဘင်ျဂါလီလူမြိုးမြားအား ဥပဒနှေငျ့အညီ ပွနျလညျလကျခံရနျအတှကျလညျး ဆောငျရှကျနကွေောငျး၊ ဒသေခံတိုငျးရငျးသားရခိုငျမြားနှငျ့ ဘင်ျဂါလီလူမြိုးမြား နှဈဖကျစလုံးက လကျခံနိုငျသညျ့အခွအေနရှေိရနျလိုအပျပွီး မွနျမာနိုငျငံသားစဈစဈမြား ဖွဈသညျ့ ဒသေခံရခိုငျတိုငျးရငျးသားမြား၏ဆန်ဒကို အလေးထားရမညျဖွဈကွောငျး၊ ဒသေခံရခိုငျတိုငျးရငျးသားမြားကလကျခံမှသာ ပွညျသူလူထုအားလုံးက ကနြေပျလကျခံမှာ ဖွဈကွောငျး၊ ၎င်းငျးတို့လကျခံနိုငျမညျ့ အခွအေနမေရှိလငျြ တဈဖကျတှငျနိုငျငံရေး မတညျငွိမျမှုမြားဖွဈပျေါလာနိုငျသဖွငျ့ မြှတသညျ့ဆောငျရှကျမှုမြား လုပျဆောငျပေးရနျ အကွိမျကွိမျအခါခါ ပွောကွားခဲ့ခွငျးဖွဈကွောငျး၊ ဒသေခံတိုငျးရငျးသားရခိုငျလူမြိုးမြားက ရခိုငျဒသေသို့ ရောကျရှိလာသညျ့ လူသားခငျြးဆိုငျရာ နိုငျငံတကာမှ အကူအညီပေးမှုမြားသညျ ဘင်ျဂါလီမြားအတှကျသာဖွဈပွီး မိမိတို့ရခိုငျလူမြိုးမြားအား ပေးအပျခွငျးမရှိသညျကို သိရှိကွကွောငျး၊ ဘင်ျဂလားဒရှေျ့နိုငျငံသို့ ထှကျခှာသှားသညျ့ ဘင်ျဂါလီလူမြိုးမြားအားပွနျလညျ လကျခံရာတှငျလညျး ၁၉၈၂ ခုနှဈနိုငျငံသားဥပဒေ၊ ၁၉၉၂ ခုနှဈ မွနျမာ-ဘင်ျဂလားဒရှေျ့ နှဈနိုငျငံသဘောတူညီခကျြမြားနှငျ့ အညီစိစဈလကျခံမညျဖွဈပွီး မိမိတို့အနဖွေငျ့ ငွငျးပယျရနျမရှိကွောငျး၊ ၁၉၇၈ ခုနှဈကလညျး ယခုကဲ့သို့အလားတူ ဖွဈစဉျတဈခုဖွဈပှားခဲ့ကွောငျး၊ ယငျးအခြိနျက မွနျမာနိုငျငံဘကျမှ ကောကျယူထားသညျ့စာရငျးအရ လူဦးရေ ၁၅၆၆၃၀ ဦးဘင်ျဂလားဒရှေျ့ နိုငျငံဘကျသို့ ထှကျပွေးခဲ့သျောလညျး နှဈနိုငျငံသဘောတူညီခကျြအရ ပွနျလညျစိစဈ လကျခံသညျ့အခြိနျတှငျ ဘင်ျဂလားဒရှေျ့နိုငျငံဘကျမှ အဆိုပွုခကျြအရလူဦးရေ ၁၈၆၉၀၀ ကြျောအားလကျခံခဲ့ရသဖွငျ့ လူဦးရေ ၃၀၀၀၀ ကြျော ပိုမိုလကျခံခဲ့ရကွောငျး၊ ယခုအခြိနျတှငျလညျး ၎င်းငျးတို့ဘကျမှပွောသညျ့လူအရအေတှကျအတိုငျး လကျခံ၍မရကွောငျး၊ အဆိုပါကိစ်စမြားအား အစိုးရကဆောငျရှကျမညျဖွဈပွီး တပျမတျောမှ ကူညီဆောငျရှကျပေးမညျဖွဈကွောငျး၊ လူသားခငျြးစာနာထောကျထားမှုဆိုငျရာ အကူအညီ ပေးမှုမြားအနဖွေငျ့လညျး နိုငျငံတျော၏အတိုငျပငျခံပုဂ်ဂိုလျ ဒျေါအောငျဆနျးစုကွညျ ဦးဆောငျသညျ့ ရခိုငျပွညျနယျတညျငွိမျအေးခမျြးမှုနှငျ့ ဖှံ့ဖွိုးမှုတိုးတကျမှုအကောငျအထညျ ဖျောရေး ဗဟိုကျောမတီနှငျ့ ပွညျနယျအစိုးရမှသကျဆိုငျရာအဖှဲ့အစညျးမြားက ဆောငျရှကျပေးနပွေီး တပျမတျောမှ ပူးပေါငျးပါဝငျကူညီဆောငျရှကျပေးလကျြရှိကွောငျး ရှငျးလငျး ပွောကွားသညျ။
ထို့နောကျ ရခိုငျပွညျနယျအတှငျး တပျမတျောမှ စုံစမျးစဈဆေးရေးအဖှဲ့ ဖှဲ့စညျး၍ သတငျးထုတျပွနျခဲ့မှုအခွအေနမြေား၊ ရခိုငျပွညျနယျအတှငျး ဖွဈပှားလကျြရှိသညျ့ ဖွဈစဉျမှနျမြားအား နိုငျငံတကာမှ သိရှိစရေနျအတှကျ ဆောငျရှကျသငျ့သညျ့ကိစ်စရပျမြား၊ မွနျမာနိုငျငံသို့ ပွနျလညျဝငျရောကျလာသညျ့ ဘင်ျဂါလီလူမြိုးမြားအတှကျ အစိုးရမှ ပွနျလညျနရောခထြားနိုငျရေး ဆောငျရှကျနမှေုအခွအေနမြေားနှငျ့စပျလဉျြး၍ ဧညျ့သညျတျောဝနျကွီး၏ အကွံပွုခကျြမြားကိုအမွငျခငျြးဖလှယျပွီး အကွမျးဖကျမှု နှိမျနငျးရေးနှငျ့ မူးယဈဆေးဝါးတိုကျဖကျြရေးအတှကျနှဈနိုငျငံ တပျမတျောနှဈရပျလကျတှဲ ပူးပေါငျးဆောငျရှကျနိုငျရနျ နညျးလမျးရှာဖှရေေးကိစ်စရပျမြားအား ရငျးနှီးပှငျ့လငျးစှာ အပွနျအလှနျဆှေးနှေးခဲ့ကွသညျ။